धार्मिक यज्ञबारे केही कुरा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
धार्मिक यज्ञबारे केही कुरा
२०७० फाल्गुन १२, सोमबार ०३:४५ गते
आजभोलि मानिसहरुमा दिन प्रतिदिन धार्मिक चेतना बढ्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । पूजा, पाठ, रूद्री, जप, होम आदिले मानसिक तनाव कम हुन्छ र गृह शान्ति पनि हुन्छ भन्ने भनाइलाई एउटा हिन्दु धर्मावलम्बीको नाताले मैले पनि स्वीकारेको छु र घरपरिवारको चिना (जन्मकुण्डली) ज्योतिषलाई देखाएपछि उनको रायसल्लाहअनुसार यदाकदा म पनि घरमा स्वस्तिशान्तिको कामना गर्दै पूजापाठ गर्ने, गराउने गर्दछु । यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा हुने असरको अनुभूति मैले पनि गरेको छु । यस अर्थमा मैले आफूलाई नास्तिक होइन, एउटा आस्तिक व्यक्तिमा दर्ता गर्ने गरेको छु ।
वर्तमान समयमा गाउँ होस् या सहरमा कुनै सामाजिक संघ वा संस्थालाई आर्थिक अनुदान संकलन गर्नुपर्दा श्रीमद्भागवत यज्ञ गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ र यसले संघसंस्था सञ्चालन गर्न वा भवन आदि निर्माण गर्न प्रशस्त टेवा मिलेको छ भन्ने कुरा सुन्न र मिडिया वा छापाहरुमा छ्यासछ्यास्ती आउने गर्दछ । तसर्थ, यस किसिमको कार्यलाई प्रशंसा नगरी बस्न सकिन्न । यस कार्यमा होमिएर काम गर्ने संयोजकलगायत सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई साधुवाद दिनु पनि अन्यथा हुँदैन । वहाँहरुले यस्तो बेफुर्सदिलो जीवनमा पनि दिनरात खटिएर यज्ञ सम्पन्न गर्न जुन योगदान दिनुहुन्छ, त्यस कार्यलाई खुल्ला हृदयले सराहना गर्नुपर्दछ ।
यस्तो किसिमको यज्ञ गर्ने सिलसिलामा श्रीमद्भागवतगीता आदिका बारेमा प्रवचन कार्य हुने गर्दछ र श्रोताहरुलाई कुनै एउटा अमूक कार्य सम्पन्न गर्ने कामका लागि सहयोगस्वरुप चन्दा प्रदान गर्न वाचक वा अन्य कार्यकर्ताहरुबाट उत्प्रेरित गरिन्छ । यो काम करकापको हुँदैन, स्वैच्छिक हुन्छ । सक्नेले आफ्नो गच्छेअनुसार चन्दा प्रदान गर्ने गर्दछ र निज चन्दादातालाई सबैको अगाडि चन्दाअनुसारको तोकिएको मानसम्मान प्रदान गरिन्छ । मलाई पूर्ण ज्ञान र पक्का निधो त छैन, तर यसरी प्राप्त भएको चन्दामध्येबाट वाचक र उनका सहयोगीहरुलाई राम्रै प्रतिशतको हिसाबले छुट्याइने गरिन्छ रे । कथावाचनको बीचबीचमा भजन–कीर्तन, नाचगान गराउने समूह पनि तैनाथ हुन्छन् । त्यहाँको वातावरण ज्यादै मनोहर र श्रुतियोग्य हुन्छ । त्यो क्षेत्रमा सजाइएको पण्डालहरुले पनि त्यो स्थललाई विशेष शोभनीय बनाएको हुन्छ । जति चन्दा बढी संकलन हुन्छ, त्यसकै हिसाबले एउटा निश्चित प्रतिशतको रुपमा वाचक समूहलाई पनि जाने हुनाले श्रोतालाई आकर्षण गर्ने खुबी वाचकमा जति बढि हुन्छ, त्यति बढी चन्दा पनि संकलन हुने गर्दछ । यो भयो वाचकको खुबीको कुरा ।
मैले यहाँ प्रसंग उठाउन लागेको कुरा भने अर्कै हो । केही दिनअगाडि मैले वास्तुबारे पनि ज्ञान भएको र जन्मकुण्डलीको पनि फल बताउन सक्ने मेरा एक जना अनुभवी मित्रलाई घरमा निम्तो गरेर परिवारको जन्मकुण्डली हेराउने कार्य गराएँ । मेरी माइली बुहारीको जन्मकुण्डलीअनुसार उनलाई पितृदोष देखिएको हुनाले श्रीमद्भागवत सप्ताह गराएको ठाउँमा गएर पितृदोष मेटाउन कार्य गर्नुपर्छ भन्ने वहाँको सल्लाहअनुसार केही हप्ताअगाडि स्थानीय गणेशथान बसेनीमा सम्पन्न सप्ताहका एक जना आधिकारिक व्यक्तिसँग फोनबाट उक्त कुरा दर्शाएँ र त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ भनी प्रश्न गर्दा अरु केही चाहिँदैन, त्यो कार्यका लागि रू. २५,०००।– लाग्छ, पूजाको सामग्री र रकम लिएर तुरून्तै आउनुहोस् भन्ने उत्तर पाएँ । सर्वप्रथम रकम सुन्ने बित्तिकै मलाई आश्चर्य लाग्यो र म अनकनाएँ । तर, फेरि तुरून्तै मसँग फोन संवाद गरिरहनुभएका उक्त आधिकारिक व्यक्तिले त्यसको आधी रू. १२,५००।– रकमले पनि हुन सक्ने कुरा बताएपछि उक्त कुरा मेरी बुहारीलाई सुनाएँ । बुहारीले त्यति धेरै रकम जुटाउन नसक्ने कुरा गरेपछि उक्त यज्ञमा गएर पितृदोष मेटाउने उनको काम रोकियो ।
मलाई भने यो घटनाले मनमा पीडा भयो । कारण, कुनै सामान्य परिवारमा कसैको जन्मकुण्डलीअनुसार पितृदोष देखियो भने त्यसलाई मेटाउने काम गर्न नसकिने रहेछ । सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने सामूहिक कार्यमा त त्यति धेरै रकम चढाउनु पर्ने रहेछ भने घरैमा ब्राह्मणहरु राखेर सप्ताह गरी पितृदोष मेटाउने काम गर्नु झन् मुस्किलको कुरो हुन सक्छ । यस घटनाले थोरै भए पनि धार्मिक चेतना भएको मेरो मनमा निम्नलिखित प्रश्नहरु उठिरह्यो ।
१) के ब्राह्मणहरुअब नेपालका डाक्टरहरु जस्तै महँगा भएका हुन् ?
२) के धार्मिक कार्यहरुमा पनि कमिसनको खेल हुन्छ ?
३) के यस्ता किसिमका धार्मिक कार्यक्रमहरुमा गरिबहरुले सहभागिता जनाउनै सक्दैनन् ?
४) के यस्ता कार्यक्रमहरुमा आफ्नो गच्छेअनुसारको स्वैच्छिक दानको प्रक्रिया मिलाउन सकिन्न ? यसले गर्दा त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा धेरै मानिसहरुको सहभागिता बढ्ने थियो र यज्ञको उद्देश्यपूर्तिमा पनि केही टेवा मिल्न सक्ने थियो ।
५) के सामान्य धार्मिक प्रक्रियाद्वारा पितृदोष मेटाउन सकिन्न ?
६) के सस्तो र सुलभ ढंगले धार्मिक यज्ञहरु सम्पन्न गर्न सकिँदै सकिँदैन ? आदिआदि
धार्मिक चेतना मनबाट हटाउन नसकेको मेरो कमजोर मनस्थितिमा यो अनुत्तरित प्रश्नहरुले मलाई दिइरहेको पीडा बाध्यतापूर्वक सहिरहेको छु र यसको समाधान खोज्न जहाँतहीँ भौँतारिरहेको छु ।
(भ.न.पा.–२, नारायणगढ बसपार्क)